“မိဘ” စစ်စစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖူးချင်လွန်းလို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “မိဘ” စစ်စစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖူးချင်လွန်းလို့
“မိဘ” စစ်စစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖူးချင်လွန်းလို့
Posted by စဆရ ကြီး on Feb 23, 2014 in My Dear Diary | 21 comments
မီးခိုးငွေ့များ အပေါ်သို့လွင့်ပျံသွားသည်ကိုကြည့်ရင်း ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက် လက်ကျန်ဆေးလိပ်တိုလေးကို ပြာခွက်ထဲ ခပ်ပြင်းပြင်းထိုးချေပြစ်လိုက်သည်။ မိန်းမက မကြိုက်ပါဘူးဆိုကာမှ သောက်ချင်နေလွန်းသည့်ဆေးလိပ် မှတ်ရောဟယ်ဟုဆိုကာ မကျေမနပ်စိတ်ကြီးဖြင့် ထိုးထည့်လိုက်ခြင်းလဲဖြစ်သည်။ မိန်းမသာ ဒီအကြောင်းသိရင်တော့ ငါးသလောက်ပြုံးလေးနှင့် မျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးပြီး ကျေနပ်ပြုံးကြီးတစ်ချက် ထိုးနေပေဦးမည်ဟုလည်း တွေးမိသည်။
တစ်ကယ့်တစ်ကယ်တော့ ၁၆ နှစ်သားကပေါင်းလာတာ ခုလောက်တော့ လွယ်လွယ်နဲ့ပြတ်ပါ့မလားလို့။
ခက်တော့လည်း အတော်လေးခက်သည်။ ဘ၀မှာလိုချင်တိုင်းဖြစ်တဲ့သူ သိပ်တော့မရှိနိုင်ပေ။ လိုချင်တာလေးတွေနှင့် ဖြစ်နေတာလေးတွေ အနီးစပ်ဆုံးတူညီရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီး ကျေနပ်နေကြရသူတွေသာများပေမည်။ ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းသာပေါ့။
တစ်ချို့သောသူများထက် သာသည်မှာ ကိုရင်စိုင်းမှာ ချစ်စရာ ဇနီးမယားလေးရှိသည်ပေါ့။ ထို့ထက်ပိုကောင်းသည်မှာ ထိုချစ်ဇနီးလေးလဲ ကိုရင်စိုင်းအနားမှာ ရှိနေသည်ပေါ့။ ထိုသို့တွေးပြီးသကာလ အနားမှာရှိနေသော၊ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်မောကျနေသော ဇနီးနဖူးလေးကို ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်လေသည်။
ထို့နောက် ကုတင်ဘေးမှ ဖုန်းကိုလှမ်းယူကြည့်လိုက်သည်။ မနက် ၄း၀၀ တိတိရှိပြီဆိုပါလား။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဇနီးမယားကို နောက်ထပ် ၉း၀၀ တိတိတော့ ပိုင်နိုင်သေးသည်ပေါ့။
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ ဘယ်တော့မှ ထပ်တူမကျနိုင်ပါ။ မကျနိုင်ဆို ဆန္ဒသည် သူ့ဖာသာ သီးသန့်ဖြစ်တည်နေပြီး ဘ၀သည် မျက်မှောက်ပြုထားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုရင်စိုင်းလဲ အိပ်ဦးမှပါလေဟုဆိုကာ တစ်ရေးပြန်အိပ်ပျော်သွားလေသည်။ အိမ်မက်ထဲတွင်မတော့ အလုပ်ကအပြန် ကြိုဆိုနေသော ချစ်ဇနီးလေး၊ သားကြီး၊ သမီးလေးတို့နှင့်။ မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးသည်ကား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ချစ်ခင်လေးစား၊ နွေးထွေးကြည်နူးမှုများအပြည့်နှင့်။
ထို “အိမ်” လေးသည် အိမ်မက်ထဲမှာပင် အိမ်မက်ဟု သိနေလျက်သားနှင့် အလွန်လှပသောအိမ်မက်တစ်ခုအနေနှင့် ပျော်ရွှင်စွာပင် ကိုရင်စိုင်းအနာဂါတ်တွေကို သူချည်းသက်သက်ဖြင့်ထုဆစ်နေတော့သည်။
သူ့ချည်းသက်သက် မဆန့်မပြဲနဲ့ ရင်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်တယ်
ငါ့ဇနီးရော၊ ငါ့သားရော၊ ငါ့သမီးရော
အဲ့ဒီအစွဲကြီးကလဲ ကျွတ်ကို မကျွတ်နိုင်တော့ပါဘူး
လူတွေက အဲ့ဒါကျွတ်မှ လွတ်ငြိမ်းရာ ရတယ်ဆိုလား
ငါ့မှာတော့ အဲ့ဒါလေးကို မွေးစက ခုတိုင်
ရူးသွပ်တာ၊ တက်မက်တာ လွန်တယ်လို့ဆိုလေမလား
ရုတ်ချည်းလှုပ်နှိုးခံလိုက်ရသောကြောင့် ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက် ဘာများဖြစ်သလဲဟု ထလိုက်သောအခါတွင်မှ ပစ္စုပ္ပန်ကို မျက်မှောက်ပြုမိလေသည်။
ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်ပြန်ရပေတော့မည်။ လင်တစ်ကွဲ၊ မယားတစ်ကွဲ ခွဲလျက်သာနေကြရပေဦးမည်။ တစ်ချိန်တုန်းက Skype ပေါ်မှ မြင်တွေ့နေရသည်ထက်တော့ များစွာသာသေးသည်။ မခွဲခင် နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးတစ်ပွင့်တော့ ခြွေနိုင်သေးသည်။ တစ်ခဏတာအတွက်တော့ တစ်ယောက်ရင်ငွေ့တစ်ယောက် ခိုလှုံနိုင်သေးတော့သည်။
ရှေ့ရေးကိုတိုင်ပင်ကြလေသည်။ အသက်တွေလည်း အတော်လေးကို လူငယ်ပိုင်းကျော်လို့ လူလတ်ပိုင်းသို့ပင် ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ရည်းစားသက် ၃ နှစ်၊ အိမ်ထောင်သက် ၇ လ၊ သေချာကို ပြန်တွက်ပါမှ ရည်းစားသက်တစ်လ၊ အိမ်ထောင်သက် နှစ်လနှင့် ၃ ရက်လားရှိသေးသည်။ ရှိစေတော့… အသို့ဆိုစေကာမူ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လာပြီဆိုမှတော့ နောင်ရေးတွေ၊ သားတွေသမီးတွေအရေး တွေးရတော့မည်။
ထိုတွင်မှ စကားစစ်ထိုးခြင်းသည် အစပြုလေ၏။
ရင်ကိုဖွင့် အိမ်မက်တွေ တစ်စစီထုတ်ချေလို့
အိမ်မက်တွေ၊ အနာဂါတ်တွေကို ထုဆစ်ပုံဖော်ကြစို့လားကွယ်
ဆည်းလည်းလေးတွေ ဒို့အိမ်မှာ ချိတ်ဆွဲကြရအောင်လား။ ။
“ရှင်က ကျွန်မကို အိုပြီလို့ ဆိုတာလား”
ငင်… စကားကို အစရယ်မှ ဖော်လို့တောင်မရပေ။ လိုရင်းကို ဇွတ်အတင်းပင် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်မိနေသည့်လိုင်းကားများလို ရရာနေရာမှပင်ကျော်တက်လိုက်ရသည်။
“ရှင်က ဘယ်သူ့ကလေးများ သွားချီချင်နေတာတုန်း”
ရော်.. ခက်ချေပြီ၊ ဗဟိုလမ်းကသွားလဲပိတ်၊ ဘုရင့်နောင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း၊ ဒါနဲ့ပဲ အင်းစိန်-ပြည် လမ်းပေါ် လီဗာသံ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပေးပြီး မောင်းတက်လိုက်တော့သည်။ လှည်းတန်းမှ ပိတ်ချင်ပိတ်ပါစေတော့ပေါ့။ ဟံသာဝတီမှာပိတ်တာ နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့။
“ကြံကြီးစည်ရာ.. ကိုယ့်ဖာသာတောင်အနိုင်နိုင်၊ ဘယ်က ကလေးကိုခေါ်ပြီး ဒုက္ခပေးဦးမလို့တုန်း”
ပွဲပြီးကာနီးမှ ပင်နယ်တီအသွင်းခံလိုက်ရသလိုပင်၊ ဟေးကနဲ အော်လိုက်သံများကြား အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲကျသွားသော ဂိုးသမားလိုပင်။ ပွဲပြီးခရာမှုတ်သံကို ကြားလိုက်ရသည့်အလား ပြန်ပြောစရာ စကားတစ်ခွန်းမှ ရှာမရပေ။
တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်နေသည့် ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးမှ ထွက်ကျသွားသည့် နှလုံးသားအား အသာအယာဖုန်လေးသုတ်၊ သူ့နေရာသူနေသားကျအောင် ပြန်လည်တပ်ဆင်လိုက်ပြီးကာမှ ၀င်သက်၊ ထွက်သက်မှန်အောင် ရှူရှိုက်လိုက်နိုင်လေသည်။
ည ညတွေ အတော်လေးမှောင်မိုက်နေသည်မှာ သူ့ချည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ ကိုရင်စိုင်းကြောင့်ဆိုတာ ပိုသေချာသွားလေသည်။ ဒီတော့လဲ အိမ်မက်တွေ ပိုကြာကြာ မက်လို့ရပေတာပေါ့။
မဟုတ်ဘူး၊ သူ့ချည်းသက်သက်တော့ တယ်ပြီးလှပေတယ်မထင်ပေဘု
“မိဘ” စစ်စစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖူးချင်လွန်းလို့။ ။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နှစ်ယောက်လုံးရုန်းကန်နေရသမို့ မိဘဖြစ်ခွင့် မဖြစ်ခွင့် မိဘဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ပြသနာကို နားမလည်လို့မဆွေးနွေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး မိဘဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကိုတော့ နားလည်နိုင်ပါ တယ်။ တချိန်ချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ချစ်ဇနီးတယောက်လုံးတောင် အနားရောက်နေပြီပဲဟာ။
အင်းးးး ။ ကိုရင်စိုင်း စာတွေ ဖတ်ရတာ ၊
ကိုရင်စိုင်း က သိပ် ခံစားတတ် ( သိပ်နု ) သကိုးကွယ့် ။
အဲ့လိုနုလို့လဲ ခုလိုစာလုံးတွေ ထွက်ကျလာတာပေါ့ ဘဖောရယ်..
သများတွေလို စုံစုံလင်လင်မရေးတတ်ပဲ ဘ၀အကြောင်းနဲ့ ခံစားချက်အကြောင်းတွေပဲ ရေးနေရတဲ့သူပါ..။
အလုပ်ကို ကင်းကင်းရှင်းရှင်းလုပ်နိုင်တော့ မြန်မြန်စုမိတယ်
လင်မယားဆိုတဲ့ဘဝမှာ မိသားစုဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်း အထူးပါဝင်လေတော့
ဒါကလည်း အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက် လီဗာမလျှော့နဲ့ ကိုကိုရေ ငိငိ
( ဘါဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စကိုတော့ နှစ်ဦးသေခြာဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် )
သူများတွေလည်း ဒီလိုဘဲ မွေးနေကြတာပါဘဲ သူ့ဖါသာအဆင်ချောသွားမှာပါ
လေသံကြည့်ရတာ ဘပုမဖြစ်နိုင်ဘူး.. သူ့ဆရာအူးကြောင်လေပေးနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောတာခံရတယ်..
ဆိုတော့ကာ… အဲလိုပဲ မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးကလာချင်နေရင်တော့ ကိုယ်ဘယ်လိုပဲတားတားပါလေ၊ မလာချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရွှေလက်နဲ့ လှမ်းခေါ်တောင် လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး
၁) မိခင် အသက်အရွယ်
၂) မိဘ ငွေရေးကြေးရေး
၃) စောင့်ရှောက်နိုင်မဲ့သူ၊ ကလေးဘယ်သူထိန်းမှာတုန်း ဆိုတာမျိုး၊ မွေးပြီး မပြီးဘူးကိုးးး
၄) သားသမီးကို ဘယ်မှာ အခြေကျစေမှာတုန်း ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။
၅) အားလုံး အသင့်ဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားရမှာ အများကြီးပါ။
နောက်တစ်မျိုးပြောရရင်တော့ ဘာမှ စဉ်းစားမနေနဲ့။
ကိုယ့် ကလေး က သူ့ကံနဲ့သူလာတာရယ်။
လူထွင်းတဲ့ ခံတွင်းမဟုတ်၊ နတ်ထွင်းတဲ့ ခံတွင်းဆိုတာ။
အခြေအနေတွေက ကိုယ့်ကို ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သင်သွားလိမ့်မယ်။
စိတ်ပူတတ်ရင်တော့ အခြေအနေတိုင်း က စိတ်ပူစရာကြီးပဲ။
ကျုပ် ကို စိတ်ဆိုးမနေနဲ့တော့နော့။
ကျုပ် လွန်တာ မှားတာရှိရင် တောင်းပန်တယ်ရယ်။
စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာ.. အမှန်တော့ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်ခင်တဲ့သူတစ်ယောက် အစွန်းရောက်သွားသလားလို့ ၀င်ထောက်ပြရာကနေ အမြင်တွေလွဲကုန်တာပေါ့.. အားလုံးကျေနပ်ရင် ပြီးတာပါပဲနော့
၂) စားနိုင်သောက်နိုင်ထက်တော့ ပိုပါတယ်
၃) ယောက္ခမကြီးက ၈ ယောက်တောင်အသာလေးထိန်းခဲ့တာ၊ ခုမြေးတွေတင် ၇ ယောက် ပျော့ပျော့လေးထိန်းထားတာ
၄) မြေကြီးပေါ်မှာပဲ ခြေကျစေမယ်စိတ်ကူးထားပါတယ် (သများတွေပြောတဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဆိုတာကြီး နာမည်နဲ့တင်ရွံလို့)
၅) ဘာမှတော့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး
ဘာမှမတွေးတော့ပါဘူးလေ… ကလေးအမေအဆင်သင့်ဖြစ်မှ ကလေးနေပါစေ၊ ခုတော့ ကလေးလဲ ကလေးလိုနေ၊ လူကြီးလဲ လူကြီးလိုပဲနေပါမယ်လို့
စာသားလေးတွေများ… လှပ ပျော့ပျောင်းပြီး… ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ…
ခံစားတတ်သူ…. ဖန်တီးတတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ရာ…
သေချာတယ်.. ကိုဒညင်းခွက်မန့်တာမှာရော၊ ကျွန်တော်မန့်တာမှာရောပါ သေချာပေါက် ရဲရဲတောက်နေစေရမယ်။
ဒီရွာအကြောင်း ရိုး ဟိုး ဟိုးးးးးး နေပြီ
လင်ရယ်မယားရယ်လို့ ဖြစ်ရင် ဘာလုပ်ကြလို့ ခလေးရဂျ ရဒါတုံး.. နားမလည်ဗောင်..
ကျောက်စ်မောင်နှံကတော့ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစမို့…
ရှေ့နှစ်လောက်မှ သားသားမီးမီး အပိုင်ယူမယ်…
အခုတောင်ချက်ရပြုတ်ရ ဈေးသွားရနဲ့ မအားလပ်တာမို့…
အနှီးလျှော်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သေးလို့ပါဗျာ… အားဟိ…
ဘဝ တစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ
ဆည်းလည်း လေးတွေလဲ လိုသပေါ့.
ဒါပေမင့် အခြေအနေ အချိန်အခါတွေကို ထောက်ချင့်လို့
ဆည်းလည်းသံ မြိုင်စေချင်တဲ့ စိတ်ကလေးကို ခဏ လျှော့
ဆည်းလည်းအတွက် လိုမှာလေးတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်….
အဆင်သင့် ဖြစ်မှ လက်ကမ်းကြိုမယ် လို့ ယုံကြည်ရင်း……………
(ဘာမန့်လိုက်လဲ မသိတော့လို့ ရှင်းပြပေးဂျဘာဗျို့)
မိန်းကလေး အသက်၃၅ မတိုင်မီ ကလေးယူသင့်တယ်
တစ်ချို့ ၃၅ နားနီးလို့
ကလေး အရင် ယူထားသင့်တာပေါ့နော်?
ဟေးးးး ကောင်းပြည့်ကို မွေးစားမယ်… စိုင်းကို မွေးစားမယ်
မွေး ဖို့ ပြောတာ။
​ယောက်ျား​လေး​တွေက​တော့ က​လေးသိပ်​လိုချင်​ကြတာ.. သူတို့အတွက်​က​တော့ အလုပ်​ကပြန်​လာ.. က​လေး​လေးကိုချစ်​.. တီတီတာတာ​ပြော.. သိပ်​​ပျော်​စရာ​ကောင်းတဲ့ ဘဝ​ပေါ့..
အဲ.. မိန်းမ​တွေဘက်​ကျ​တော့.. ကိုးလက လွယ်​ရဦးမယ်​.. ဖွားရတဲ့ဒုက္ခကို ခံစားရမယ်​.. ​​မွေးပြီး​တော့လည်း က​လေး​ဝေယျာဝစ္စ.. ​ချေးယို..​သေး​ပေါက်​.. အနှီးလဲ.. သန်း​ခေါင်​သန်းလွဲ နို့ထတိုက်​.. အဲဒီက​လေး တစ်​သက်​လုံးက အ​မေလက်​က မလွတ်​ဘူး​လေ.. အ​မေ ပီသချင်​တဲ့ မိန်းမ​တွေက အ​သေအချာပြင်​ဆင်​ပြီးမှ က​လေးယူချင်​ကြတာ.. ​သေချာ​ဆွေး​နွေးကြည့်​ပါဦး​နော်​..
ဘယ့်နှယ့်ဂျာ..အပျိုကြီးတွေလူပျိုကြီးတွေကော်မန့်ပဲတွေ့နေရတယ်… သိပ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့လေ…အဟိဟိ ….ပြေးပြီ…
ကလေးဆိုတာကလဲ ယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကြ ရချင်မှ ရတာ….
…ကလေးလိုချင်လွန်းလို့ တနေကြသူတွေမှာ မရ ကြပဲ
တစ်ချို့ တစ်ချို့ တွေမတော့ ဘု စု ခရု တွေ ပလုံစီလို့ရယ်…
ဒါကြောင့်လဲ မိဘ ဆိုတာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ရတာမှတ်လို့လို့ ပြောကြတာပါလေ…